ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ အကြမ်းစား ဝတ်စုံနဲ့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ စူးရှထက်ရဲ့ ဗီဒီယို – XB Media Myanmar
ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ အကြမ်းစား ဝတ်စုံနဲ့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ စူးရှထက်ရဲ့ ဗီဒီယို
မော်ဒယ်စူးရှထက်ကတော့ ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ အကြမ်းစား ဝတ်စုံတွေနဲ့အတူ ရိုက်ကူးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ အဆိုတော် အစ္စဏီကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့ မော်ဒယ်စူးရှထက်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုတိုမော်ဒယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ပါ ရပ်တည်နေတဲ့ စူးရှထက်ဟာ MTV တွေပါ ရိုက်ကူးလာရပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ အစ္စဏီကိုတရားစွဲဆိုထားတာကြောင့် အမှုရင်ဆိုင်နေရပြီး သူမကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်သူအချို့နဲ့ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ စူးရှထက်ကတော့ ဝေဖန်မှုတွေ ဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေ သူမရဲ့လမ်းကို ရှေ့ဆက်လျှောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ပုံတွေ ရိုက်ကူးလေ့ရှိတဲ့ စူးရှထက်ကတော့ ရိုက်ကွင်းတခုပေါ်မှာ အကြမ်းစားဒီဇိုင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့ MTV ထွက်လာတဲ့အခါကျရင် အသေအချာတွေ့မြင်ရမှာပါနော်။ ခုတော့ ရိုက်ကွင်းပေါ်က သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ မြင်ရတဲ့ စူးရှထက်
စူးရှထက်ရဲ့ ဖက်ရှင်ကတော့ တကယ်ကို အလန်းစားပါပဲနော် ပရိသတ်ကြီးကရော သဘောကျနှစ်ခြိုက်ရဲ့လား?
Video-Source – Sue Sha Htet
မျောဒယျစူးရှထကျကတော့ ရိုကျကှငျးပျေါမှာ အကွမျးစား ဝတျစုံတှနေဲ့အတူ ရိုကျကူးနတောတှရေ့ပါတယျ။ အဆိုတျော အစ်စဏီကို တရားစှဲဆိုထားတဲ့ မျောဒယျစူးရှထကျကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျနရေပွီဖွဈပါတယျ။ ဖိုတိုမျောဒယျတဈဦးအနနေဲ့ပါ ရပျတညျနတေဲ့ စူးရှထကျဟာ MTV တှပေါ ရိုကျကူးလာရပွီဖွဈပါတယျ။လကျရှိမှာ အစ်စဏီကိုတရားစှဲဆိုထားတာကွောငျ့ အမှုရငျဆိုငျနရေပွီး သူမကို ဝဖေနျတိုကျခိုကျသူအခြို့နဲ့ ကွုံတှရေ့ငျဆိုငျရတာဖွဈပါတယျ။ စူးရှထကျကတော့ ဝဖေနျမှုတှေ ဘယျလိုပဲရှိနပေါစေ သူမရဲ့လမျးကို ရှဆေ့ကျလြှောကျနတောဖွဈပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျအလှကိုပျေါလှငျစတေဲ့ပုံတှေ ရိုကျကူးလရှေိ့တဲ့ စူးရှထကျကတော့ ရိုကျကှငျးတခုပျေါမှာ အကွမျးစားဒီဇိုငျးနဲ့ သရုပျဆောငျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှကေိုတော့ MTV ထှကျလာတဲ့အခါကရြငျ အသအေခြာတှမွေ့ငျရမှာပါနျော။ ခုတော့ ရိုကျကှငျးပျေါက သူမရဲ့ပုံရိပျတှကေို ပရိသတျကွီးအတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ရိုကျကှငျးပျေါမှာ မွငျရတဲ့ စူးရှထကျ
စူးရှထကျရဲ့ ဖကျရှငျကတော့ တကယျကို အလနျးစားပါပဲနျော ပရိသတျကွီးကရော သဘောကနြှဈခွိုကျရဲ့လား?
သားတပည့်ဖြစ်သူ ဖြိုးမြတ်အောင်အတွက် မြန်မာပြည်သိန်းတန် ရေးပေးလိုက်တဲ့ ခက်တယ် သီချင်း လူကြိုက်များ
ချစ်သူ ဘေဘီမောင် ကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးကို သီးသန့်ဆိုပြခဲ့တဲ့ သားဂန်း